New Boeing 777-9 jet inobhururuka kuenda kuDoha International Airport
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » New Boeing 777-9 jet inobhururuka kuenda kuDoha International Airport
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • vanhu • Qatar Kuputsa Nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
New Boeing B777-9 jet inobhururuka kuenda kuDoha International Airport.
Ndege iyi, iyo inotarisirwa kujoinha ngarava dzeQatar Airways munguva pfupi iri kutevera, ichange iri ndege huru uye inoshanda zvakanyanya pasi rose, inounza 20 muzana yakaderera kushandiswa kwemafuta uye kuburitsa kupfuura ndege dzechizvarwa chakapfuura.
Qatar Airways yakagamuchira jet yemazuva ano, isingadyi mafuta kuDoha International Airport.
Iyo 777-9 inovaka pane inofarirwa-inofarirwa uye inotungamira pamusika 777 uye 787 Dreamliner mhuri.
Ndege icharamba iri muQatar isati yadzokera kuSeattle's Boeing Field kuti ienderere mberi nehurongwa hwayo hwekuyedza.
Qatar Airways nhasi yakaratidza basa rayo semutengi wekutanga wepasi rose wechizvarwa chazvino Boeing 777-9 ndege mushure mekugamuchira iyo yekupedzisira-yemazuva ano, jeti inoshanda mafuta kuDoha International Airport (DIA).
Vazhinji vevaenzi veVIP vakapinda Qatar Airways Group Chief Executive, His Excellency Mr. Akbar Al Baker, kuti vagoverane mukusvika kwendege, iyo icharamba iri muQatar isati yadzokera kuSeattle's Boeing Field kuti ienderere mberi nehurongwa hwayo hwekuedza.
Ndege iyi, iyo iri kutarisirwa kupinda muboka rendege richahwina mibairo munguva pfupi iri kutevera, ichange iri ndege huru uye inoshanda zvakanyanya pasi rose ine injini mbiri, ichiburitsa 20 muzana yakadzikira mafuta ekufambisa uye kuburitswa kwemhepo pane ndege dzechizvarwa chakapfuura. Makiyi matekinoroji anogonesa kushanda uku ndeayo nyowani kabhoni-fiber composite bapiro, injini nyowani uye yakasikwa laminar inoyerera nacelles.
Boeing 777-9 inovaka pane inofarirwa-inofarirwa uye inotungamira pamusika 777 uye 787 Dreamliner mhuri kuendesa ruzivo rwekubhururuka kweramangwana. Vafambi nevashandi zvakafanana vachanakidzwa nekabhini yakagadzikana yakakwirira, hunyoro huri nani, kufamba kwakapfava, kabhini yakakura, mahwindo akakura uye chivakwa chakapamhama.
Qatar Airways Mukuru weBoka, VaAkbar Al Baker, vakati: “Makanga muri muna 2013 apo Qatar Airways Group yakatanga kuzivisa hurongwa hwayo hwekudyara mundege yechizvarwa cheBoeing.
"Mushure mekushanyira Boeing fekitori muEverett, Washington munaGunyana 2018, takave nemukana wekuona iyo 777-9 padhuze padhuze, asi nhasi inoratidza mukana wekutanga wendege uye vaenzi vedu vanoremekedzwa veVIP kuti vaone kuzvipira kwedu kwakakosha kune iyi inoshamisa ndege pano muQatar. sezvainosvika kekutanga.
"Tinodada zvikuru kuva mutengi wepasi rose wekutanga kwechigadzirwa ichi chinotungamira muindasitiri, uye kukwanisa kuratidza kuzvipira kwedu kuenderera mberi nekutsigira network yedu iri kusimukira yepasirese neboka rezvikepe rinosanganisira vadiki, vane tekinoroji uye vanobudirira mapatya- injini yendege munyika. "
Mutungamiriri weBoeing Commercial Airplanes uye CEO, VaStan Deal, vakati: "Tinoremekedzwa nekuzvipira kweQatar Airways ku777-9 uye nekudyidzana uye hunyanzvi hwainomiririra. Nekuvandudzwa kwayo kusati kwamboitika mukushanda kwemafuta uye kuburitsa uye mwero mutsva wekunyaradza, isu tinotarisira kuona 777-9 ichifadza vafambi veQatar Airway kwemakore mazhinji ari kuuya.